Interesting News In Nepali (रोचक खबर ) | Bizarre News | Tv Annapurna
मलेसियामा ट्याक्सीले गर्भवती बिरालोलाई ठक्कर दिएपछि दुई वर्ष जेल
ऐन नियमको सही कार्यान्वयन हुने हो भने कोही पनि कानुनको कठघराबाट उम्किन पाउदैन । मलेसियाका एक ट्याक्सी चालकलाई अदालतले दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । गर्भवती बिरालो मारेको अभियोगमा अदालतले बिहीबार ती चालकलाई जेल सजायको फैसला गरेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । जनवर अधिकारवादी कानुन व्यवसायी ए मोहनराजले अनावश्यक रुपमा चालकले बिरालोलाई मारेको अभियोग लगाउँदै कारबाहीको माग गरेका थिए । क्वालालमपुरदेखि बाहिर रहेको कपडा धुने ठाउँमा गत सेम्टेम्बरमा घटना भएको बेर्नामा समाचार संस्थाले जनाएको छ । बिरालोको हत्यासम्वन्धी दृश्य सिसिटिभीमा खिचिएको थियो र त्यो सामाजिक सञ्जालहरुमा भाइरल भएको थियो ।…
पहिलो पटक यौनसम्बन्ध राख्ने उमेर कुन सही ? महिला र पुरुषको समान चाहना
बीबीसी पहिलो पटक यौनसम्बन्ध राख्ने उमेर कुन हो ? यसबारे किशोरावस्थामा संसारभरि सबैमा उत्सुकता र अन्योल छ। नेपाल र पूर्वीय संस्कृतिमा विवाहपूर्व यौनसम्पर्कलाई स्वीकार्य मानिँदैन। पाश्चात्य समाजमा भने त्यस्तो कुनै प्रतिबन्ध छैन। ब्रिटेनमा गरिएको एउटा अध्ययनमा धेरै युवाहरूले कलिलो उमेरमा यौनसम्पर्क राखेर आफ्नो कौमार्य गुमाउनु सबैभन्दा ठूलो गल्ती भएको बताएका छन्। अध्ययनमा सहभागी एकतिहाइभन्दा बढी युवती र एकचौथाइभन्दा बढी युवकले आफूले पहिलो पटक यौनसम्पर्क गर्दा आफ्नो उमेर नपुगेको स्वीकारेका थिए। ब्रिटेनमा यौनसम्पर्क राख्ने सहमति जनाउन कम्तीमा १६ वर्ष पुग्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। हालै सार्वजनिक गरिएको नेश्नल सर्भे अफ सेक्सुअल आटिट्युड्स…
November 12, 2018 Annapurna TV
फरक फरक महिलाको स्तनको आकार फरक फरक हुने भए पनि एउटै महिलाको दुई वटा स्तनको आकार पनि फरक हुनसक्छ । एउटै महिलाको स्तनको आकार आखिर किन फरक हुन्छ त ? यस विषयमा विभिन्न अध्ययन भएका छन् । हालैमात्र बेलायतको एक पहिरन उत्पादन कम्पनी डिभेनहाम्सले पनि यसको बारेमा अनुसन्धानको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । यो कम्पनीले हरेक वर्ष महिलाले लगाउने ब्रा तथा पेन्टीहरुको आकारको बारेमा सर्वेक्षण गर्छ । आम महिलाले सानो, मझौला वा ठूलो मध्ये कुन प्रकारको ब्रा र पेन्टी लगाउँछन् भन्ने जान्नका लागि यस कम्पनीले यस्तो सर्वेक्षण गर्दै आएको छ…
एजेन्सी । फेसबुकले स्क्रिन र विशेष क्यामरासहितको आफ्नै नयाँ स्पिकर सार्वजनिक गर्ने भएको छ । विशेषगरी भिडियोकल सहज बनाउने लक्ष्यसाथ फेसबुकले यो नयाँ ग्याजेट ल्याउने भएको हो जसमा टचस्क्रिन डिस्प्लेका साथै अन्य थुप्रै फिचर रहेका छन् । यसले प्रयोगकर्ताको अनुहार अटोमेटिक जुम गर्दै उनीहरु जता गयो क्यामरा पनि त्यसैतर्फ देखाउने हुँदा हामीले घरमा काम गर्दै वा हिँडडुल गर्दा समेत सहज र स्पष्टसँग भिडियो च्याट गर्न मिल्ने बताइएको हो । यसकारण फेसबुक पोर्टलले टाढा रहेका व्यक्तिहरु आफूसँगै रहेको अनुभूति गराइ सामान्य भिडियोकल भन्दा छुट्टै अनुभव दिलाउने फेसबुकको दाबी छ । तर…
प्रत्येक वर्ष दशै आउनु भन्दा अगाडी लाग्ने सोह्रश्राद्धमा मृतक पितृहरूलाई पिण्डदान गरिने चलन रहिआएको छ । तर भारतको महाराष्ट्रस्थित नासिकमा सयजना पुरुषहरूले आफ्ना श्रीमतीहरूको पिण्डदान गरेका छन् । अनौठो के भने पिण्डदान गर्ने हरेक पुरुषका पत्नीहरु जिवित छन् ।जिवित पत्नीको पिण्डदान गर्ने ती पुरुषहरु पत्नीपीडित लोग्नेहरु हुन् । आफूहरु पत्नीबाट प्रताडित रहेको र छुटकारा पाउन चाहेको उनीहरुको भनाइ छ । आइतबार बिहान पूरा विधि विधानका साथ जिवित पत्नीहरुको पिण्डदानको कार्यक्रम भएको हो । श्राद्धको विधि विधान सहित उनीहरुले जिवित पत्नीहरुको पिण्डदान गरे । पिण्डदानको मन्त्रोच्चारणका लागि पण्डितहरु बोलाइएका थिए ।…
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भएको आरोप लाग्दै आएको छ । तर कतिपय अवस्थामा सामाजिक सञ्जालले ल्याइदिएका निकै सुखद क्षेणको अनुभव तपाई हामीले पनि गरेका हुन सक्छौ । फेसबुकको माध्यमबाटै एक व्यक्ति बेपत्ता भएको ४३ बर्षपछि सम्पर्कमा आएका छन् । मकवानपुरको तत्कालीन भार्ता गाउँ विकास समिति वडा नम्बर ७ हालः कैलाश–८ दुब्लुङका धनबहादुर मुक्तान घरछाडी गएको ४३ वर्षपछि सम्पर्कमा आएका हुन् । लालबहादुरका माइला छोरा धनबहादुर १३ वर्षमै २०३२ सालमा घर छाडेर हिँडेका थिए । झण्डै ४३ वर्षदेखि बेखबर मुक्तान भारतको इलाहावादस्थित साम हिगिनबटम युनिभर्सिटी एग्रिकल्चर इन्ष्टिच्युटमा मुख्य भान्सेको रूपमा…
September 29, 2018 TV-Annapurna
हुर्किरहेका बालबालिकलाई सक्खर खुवाउनु लाभदायक हुन्छ । गुलियोका लागि बालबालिकालाई चिनीको सट्टा सक्खर खुवाउने गर्नुपर्छ । यसमा भिटामिन ‘ए’ र ‘बी’ प्रचुर मात्रामा पाइन्छन् । साथै, यसमा क्याल्सियम पनि पाइन्छ, जसले बालबालिकाको हड्डीलाई बलियो बनाउने र शरीरको रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउने गर्छ । हरेक दिन बालबालिकालाई सक्खर ख्वाउँदा यसले श्वास प्रश्वास प्रणालीमा जम्मा भएको धुवाँधुलोलाई पनि हटाउँछ । प्रदूषणयुक्त वातावरणमा बस्ने बालबालिकाले त सक्खर नियमित खाँदा राम्रो हुन्छ ।
शल्यक्रियाद्वारा मुटुमा रगतको आपूर्ति चालू राख्न वैकल्पिक बाटो बनाउने प्रक्रियालाई ‘कोरोनरी आर्टरी बाइपास सर्जरी’ भनिन्छ। एन्जियोप्लास्टीको प्रक्रियाबाट धमनीले रगत आपूर्ति जारी राख्ने सम्भावना नभएमा मुटुको बाइपास शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ। साधारणतः अलि धेरै ठाउँमा धमनी बन्द भएमा वा धमनीका शाखाहरु छुट्टिने ठाउँमा तथा धमनीको लामो भागमा रोकावट भएमा कोरोनरी बाइपास शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ। यस प्रक्रियाअन्तर्गत बिनाकुनै रोकावट मुटुमा रगतको प्रवाह होस् भनेर बन्द भएको धमनीको सट्टा अर्को वैकल्पिक बाटो बनाइन्छ। यसका लागि चाहिने नली बिरामीको शरीरबाट नै लिइन्छ। यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न अब्बल जनशिक्त सहितको अप्रेसन थिएटर चाहिन्छ। मुटुलाई खोलेर गरिने…
अब यस्ता दिन पनि नजिक आउँदै छन्, जसमा मानिसको सम्पर्कबिनै रेष्टुराँको खाना खान सकिनेछ । एउटा ड्राइभरलेस अर्थात् मानिस नै नभएको कारले रेस्टुराँको मीठो खान लिएर आउनेछ र फर्कनेछ । उक्त खानाको पैसा तिर्न रेस्टुराँ पनि पुग्नुपर्ने छैन । गाडीमै भएको भेन्डिङ मेसिनमार्फत पैसा तिर्न सकिने छ । ड्राइभरलेस डेलिभरी भेइकलमा तापक्रम समेत नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ । त्यसैगरी यसमा भएको स्मार्ट भेन्डिङ मेसिनमा सेल्फीको सहायताले पैसा तिर्न सकिन्छ । यो एक प्रकारको दुई सिटे कार हो । चीनमा सम्पन्न स्मार्ट चाइना एक्स्पोमा यसको प्रदर्शन गरिएको थियो । उक्त ड्राइभरलेस गाडीको…
काठमाडौं । कण्डमको प्रयोगबारे तपाइलाई कतिको थाहा छ ? सुरक्षीत यौन सम्बन्धका लागि यो आवश्यक छ भन्ने तपाइको जवाफ होला । हो, परिवार नियोजनको अस्थाइ साधन मध्ये एक हो कण्डम । यसले विभिन्न यौनजन्य रोगहरु लाग्नबाट बचाउँछ । तर यतिमात्रै छैन कण्डमको काम । निः शुल्क नेपालका स्वास्थ्य चौकीहरुमा पाइने कण्डमका केही उपयोगिताबारे यस्तो छ जानकारीः ट्वाइलेटमा खसेको सामान निकाल्न ट्वाइलेटमा कहिलेकाहीँ हामीले बोकेका सामानहरु खस्छ । त्यस्तो अवस्थामा हामीसँग तत्कालै पञ्जा पनि हुँदैन । ट्वाइलेटबाट सामान निकाल्न कण्डमलाई हातमा लगाएर खसेको सामान निकाल्न सकिन्छ । यसको प्रयोगले तपाईको हात…